In Badan Ka Barro Sida Rasmiga Ah Ee Loola Dhaqmo Dadka Dabeecada Xun.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: May 17, 2017, 3:07 pm
Marka horre waxaan u mahad celinayaa Rabbiga weyn ee I abuuray ina siiyay garaad aan wax ku garto iyo waayo aragtinimo dheer, iguna hanuuniyay awoodna ii siiyay inaan wax qoro waxna aqriyo. Qoraalkaan kooban waxaan hadli doonaa sidda ay muhiim u tahay la dhaqanka dadka dabeecadaha xun-xun. Cidwalbo ma dabeecad xumo balse waxaa loo baahanyahay ayaa ah inay tahay muhiim la dhaqanka dadka dabeecadaha xun.
Maxaa yeelay waxaa laga yabaa qofkaas dabeecadda xun inuu yahay qof waalidkaada, eheladaada kuu dhaw, walalkaa, mise walalshaa ama aan irraahdo maamulaha shirkadda aad ka shaqeyso mise ururada aan la shaqeyso, mise haddii kale aan irraahdo goobaha waxbarashada aad ku jirto sidda iskuulada iyo jaamacadaha iyo machadyada iwm.
“Inta badan wey adagtahay inaad la dhaqanto qof dabeecad xun maxaa yeelay qofka dabeecada xun marwalbo wuxuu u moodaa inuu asiga/iyada ay gar leedahay, laakiin qofka caqliga leh hadana dabeecada xun wuxuu oganayaa inuu qaldanaa markuu xanaaqa ka baab’o. waqtigaas ayaa laga yabaa inuu raali gelin ka bixiyo wuxuu sameeyay”
La dhaqanka dadka dabeecada xun waxay ku tusinaysaa inaad tahay shaqsi horumarini karo noloshiisa/nolosheeda. Maxaa yeelay qofka waxaa wanaagsan inuu yahay shaqsi cidwalbo la heshiini karo, dantaada ayaana jirto inaad noqoto shaqsi cidwalbo la heshiini karo.
Ka fogaaw qofka dabeecada xun waxwalbo oo aad isleedahay waad isku dhici kartaan arintaan dartiisa.
Haddii dhalinyarada aad la tahay saaxibada ay yihiin kuwa dabeecad qalafsan maxaad sameynaysaa haddii aad isleedahay waad ka maarantaa misana aqabad weyn ayuu ku gelinayaa iwm waxaa haboon inaad iskeega dheeraato dadka noocaan ah, balse waxaa jirra dad dabeecad qalafsan hadana aadan ka maarmi karin sidda waalidka, qof aad u shaqayso iyo mid kuu shaqaya, midaan ayaa kaaga baahan xal u gaar ag iyo siddii aad uga guul gaari lahayd.
Waxaan hadalkeyga kusoo koobayaa haddii aad jeceshahay inaad noloshaada horumariso waxaa jiro siyaabo badan oo aad ku horumarini karto sidda:
La dhaqanka dadka wanaagsan oo lagaaga baahanyahay inaad in badan u dulqaadato madamaa aad ogtahay in qofkaan dabeecad xunyahay.
Ganacsiga aad ku jirto haddii ay jiraan dad kulla wadaago hantida ganacsigaada waxaa wanaagsan inaad wada taqaano dabeecadaha ay leeyihiin iyo sidda loo baahanyahay inaad ulla dhaqanto dadkaas, sidda aad aqoon badan ugu leedahay dadkaas ayaad u kalla fahan ogtahay.
Marwalbo haddii aad aqqoon kugu filan aad ka haysato dadka kugu heerarsan waxaad fahmi kartaa waxyaabaha lagaaga baahanyahay inaad soo kordhiso sidda habdhaqankaada wanaagsan iyo isku filnaansho nololleed.
Ku dadaal marwalbo inaad yeelato habdhaqan wanaagsan oo heshiis la noqoni karo dadka dabeecadaha xun-xun.
Kama dambeystii, Waad sameyni kartaa dhammaan qodobadaas waa haddii aad maanta diyaar u tahay inaad sameyso, waxaana kulla soo deriso doono dad noocyo badan isugu jira, sidda waalidkaada, walalahaa iyo cidda aad u shaqeyso iyo kuwa kuu shaqeeyaba , waxaas oo dhan waxaad ulla heshiini kartaa inaad marka horre aqoon kugu filan ka haysataa dhammaantooda.